अति गर्दा शंका उत्पन्न | Nagarik News - Nepal Republic Media
म २६ वर्षको अविवाहित पुरुष हुँ। मेरो एकजना प्रेमिका छ। कहिलेकाहीँ कोठामा भेटिन्छ। यसरी ऊ कोठामा आउँदा कोठा भित्र छिर्न पाको हुँदैन चुकुल लगाउन पनि बेर हुन्छ। उसले मलाई समाएर शारिरिक सम्पर्क गर्नका लागि एकदमै हतार हुन्छ। १ सेकेण्ड पनि रोक्न चाहँदिन। मलाई भने यस्तो गर्न मन पर्दैन।
किन यसो गरेको भन्दा मलाई देख्ने बित्तिकै आउट अफ कन्ट्रोल हुन्छ भन्छे। सबै केटीहरुलाई यस्तो हुन्छ होला कि उसलाई मात्र होला ? कि उसलाई कुनै शारीरिक रोग लागेको हो कि ? मलाई मात्र होइन अरु केटालाई देख्दा पनि उसलाई शायद यस्तै हुन्छ होला। त्यसकारण मलाई शंका लाग्छ अरु केटाहरुसँग पनि सम्बन्ध बनाएको छ कि ? उसलाई यो बारेमा सोध्दा हजुरबाहेक मेरो अरु कोही छैन भन्छे। अब म के भनु उसको यस्तो बानीले गर्दा ब्रेकअप दिने सोच गरेको छु। के गर्दा ठीक होला ?
प्रकाशित: २४ पुस २०७७ १२:४८ शुक्रबार